Kumbuyuutarrada - Isbarbar dhigga
MSI Casriga ah AM242TP 11M Review
MSI Casriga ah AM242TP 11M: Dib u eegis laba-daqiiqo ah Haddii aadan ahayn naqshadeeye ama naqshadeeye garaafeed baahida loo qabo, markaa xaq u yeelashada Microsoft Surface Studio-gii ugu dambeeyay waxaa laga yaabaa inay tahay mid xad dhaaf ah, laakiin qof kasta oo ku jira maaha inuu bangiga jabiyo. Kombiyuutarradan quruxda badan iyo...
2-inch MacBook Pro (M2022, 13) dib u eegis: Heesta swan ee ugu fiican ee laptop-ka is haysta ee Apple
Laba Daqiiqo Dib u eegis 13-inch MacBook Pro (M2, 2022) waa laptop is burinaya. Waa kacaan...laakin si fiican u ciyaar. Soo jiidasho leh… laakiin xoogaa caajis ah. Waa doorasho la yaab leh... waana mid caqli gal ah.(*13*) Warka wanaagsani waa in...
Dib-u-eegis Laba Daqiiqo ah Stealth 700 Gen 2 oo ay sii daysay Xeebta Turtle sanadkii hore waxay ahayd madax-madaxeedka bilaa-waayirka ah ee cajiibka ah, laakiin waxay u banaysay meel horumar ah. Tayada dhawaaqu had iyo jeer ma ahayn sida saxda ah ee ay ahaan karaysay. Inkasta oo ay bixiso Bluetooth-ka ...